Qalbi-dhagax oo Hargeysa tegay | Berberanews.com
Home WARARKA Qalbi-dhagax oo Hargeysa tegay
Hargeysa-(Berberanews)-Masuuliyiin ka tirsan Dawladda, Xildhibaano Goleyaasha Baarlamanka ah iyo dadweyne kale ayaa soo dhaweeyey Cabdikariin Muuse Qalbi-dhagax oo ah Sarkaal ka tirsan Ururka ONLF oo sanadkii la soo dhaafay lagu xidhay dalka Itoobiya, kaddib markii ay dawladda Soomaaliya dhiibtay.
Dadka soo dhaweeyey waxa kamid ahaa Madaxdhaqameedyo iyo siyaasiyiin.
Hadal uu Warbaahinta siiyey ayaa waxa uu ku sheegay inay booqashadiisa Hargeysa qayb ka tahay socdaal uu ku tilmaamay mahad celin oo uu ku marayo gobolada Soomaalida oo dhan, isagoo uga dan leh inuu ugu cawillo sidii ay uga gilgisheen xadhigiisii.
Siyaasiyiinta iyo Dad kale ee ku qaabilay Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay ku soo dhaweynayaan dareen Soomaalinimo. “Qof kasta oo Somaali ah Somaliland waxay ku soo dhaweynaysaa qalbi furan” sidaa waxa yidhi Xildhibaan Ismaaciil Suldaan Cabdi oo kamida Golaha Guurtida iyo Madaxdhaqameedka.
Previous articleHargeysa sadex qof oo ku dhintay shil gaadhi
Next articleXidhiidhka Dawlada Israaiil Iyo Carabta Qore Khadar Ibrahim